Non Asbestos Gasket Material Factory - Mpanamboatra Material Gasket Asbestos China, Mpamatsy
QF3710 tabilao mahatohitra hafanana ambany ambany asbestos
Izy io dia vita amin'ny fibre aramid, fibre carbon, fibre mineraly synthetic, menaka ary adhesive mahatohitra maripana ambany, manampy ireo additives azo ampiasana, ary vita amin'ny fomba mihodina.
Mety amin'ny karazana menaka, rano, vata fampangatsiahana, entona ankapobeny, ary haino aman-jery hafa ho toy ny fitaovana famehezana.
Nasaina manokana ho an'ny fividianana rivotra, compresseur, mpamadika hafanana lovia ary rafitra hafa amin'ny fampangatsiahana hafa na ny rafitra fanamafisam-peo mifandraika amin'ny gasket famehezana.
QF3736 Takelaka ambany-hafanana ambany asbestos
Izy io dia vita amin'ny fibre aramid, fibre carbon, fibre mineraly synthetic, adhesive mahatohitra menaka, manampy ireo additives azo ampiasaina, ary vita amin'ny fomba mihodina.
Mety amin'ny karazana menaka, gazy ankapobeny, rano ary haino aman-jery hafa ho toy ny fitaovana famehezana.
Manolo-kevitra indrindra ho an'ny indostria ankapobeny ho toy ny fitaovana fanamafisam-peo.
Izy io dia vita amin'ny fibre aramid, fibre carbon, fibre vera, adhesive mahatohitra menaka, manampy ireo additives azo ampiasaina, ary vita amin'ny fomba mihodina.
Mipetaka amin'ny tsiranoka toy ny karazana menaka, rivotra, rano, etona sns.
Natao toy ny gasket ho an'ny fiara, môtô, milina, simia petrol, sns.
QF3716 Takelaka famehezana tsy asbestos
Izy io dia vita amin'ny fibre aramid, fibre cellulose, fibre mineraly synthetic, adhesive mahatohitra menaka, manampy ireo additives azo ampiasaina, ary vita amin'ny fomba mihodina.
Azo ampiasaina mifandraika amin'ny menaka, gazy ankapobeny, rano, etona, sns.
Natao toy ny gasket ho an'ny motera fandoroana anatiny, flange fantsona, fitoeran'ny tsindry sns.
Izy io dia vita amin'ny fibre aramid, fibre mineraly synthetic, adhesive mahatohitra menaka, manampy ireo additives azo ampiasaina, ary vita amin'ny fomba mihodina.
Torohevitra manokana ho toy ny gasket fitaovana ho an'ny fitaovana an-dranomasina.
Azo ampiasaina mifandraika amin'ny menaka, gazy ankapobeny, rano sns.
Natao ho an'ny motera, paompy solika, paompin-drano, karazan-milina rehetra, flange fantsona ho toy ny fitaovana fanamafisam-peo.
Manolo-kevitra manokana hampiasaina toy ny famehezana gasket ho an'ny milina tanjona ankapobeny sy ny paompy isan-karazany.
QF3700 Takelaka ambany tsy marobe asbestos
FBYS411 Takelaka famehezana tsy asbestos
Amin'ny alàlan'ny vovo-grafita, fibre Kevlar ary lalao manokana amin'ny fametahana adhesive, ampio ireo additives azo ampiasaina, ny fampiasana ny fandikana ny rafitra ara-dalàna.
Amin'ny alàlan'ny fametahana hafanana, fibre tsy mahatohitra hafanana ary fiaraha-miasa manokana mameno hafanana inormerika, ampio ireo additives simika mifanaraka amin'izany, ny fampiasana ny fandikana ny rafitra ara-dalàna.
FBYS411 takelaka mpanoratra grafita nohamafisina tamin'ny fibre
FBYS268 Takelaka famehezana tsy asbestos
Ny aramid fibre, ny carbon fiber, ny fiberglass, sns. Ho toy ny taolam-paty, fiaraha-miasa manokana tsy mahazaka solika, ampio ireo additives simika mifanaraka aminy, fillers, ny fampiasana ny rafitra ara-dalàna amin'ny tsindry roller.
FBYS402 Takelaka famehezana tsy asbestos
Amin'ny alàlan'ny butyl latex, fibre tsy misy asbestos ary mpiorina miasa manokana, manampy ireo additives simika mifanaraka amin'izany, ny fampiasana ny fandikana ny rafitra ara-dalàna.